UKUBEKWA KWERUG YOKULALA (ISIKHOKELO SOBEKO) - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa Ukubekwa kweRug yokulala (Isikhokelo soBeko)
Wamkelekile kwigumbi lokulala lokubeka isikhokelo kuyilo kubandakanya eyona ndawo ubekwe kuyo kunye nolungelelwaniso lweebhedi ezahlukeneyo, iiragi kunye nobukhulu begumbi.
Ukubekwa kombhoxo kwigumbi lokulala yinto ebaluleke kakhulu kwindawo ekholisa ubuhle, kunye nendawo yokusebenza. Ukubekwa ngqo kombhoxo kwigumbi lokulala kunokuba ngumahluko phakathi kokungena ebhedini kunye nokukhwela ulale. Inokuchonga nokuba inyathelo lakho lokuqala kusasa kukungena kumbhoxo oshushu, okanye kumgangatho obandayo wokhuni oluqinileyo. Ngelixa oku kubonakala ngathi zizinto ezincinci, ndikholelwe, kodwa kufanelekile.
Kukho izinto ezimbalwa eziphambili ekufuneka zithathelwe ingqalelo nangayo nayiphi na ibhedi yesayizi ukunceda ukumisela ukuba loluphi uhlobo lombhoxo oluya kuyincoma indawo leyo. Ezinye zezo zinto zichaziwe apha ngezantsi.
Ukubekwa kweRug phantsi kweBhedi
Isikhokelo sokuBekwa kweRug yokulala
Ubungakanani beRug ukuze busebenziswe phantsi kweBhedi
Uhlobo kunye neMilo yombhoxo
Imilinganiselo yegumbi yeyona nto incinci inokusebenziseka, ukubona ukutshintsha ubungakanani obuya kufuna ulwakhiwo olunzulu ukwenza uhlengahlengiso. Unoko engqondweni kubalulekile ukufumana ityali elungileyo kwaye ubungakanani bebhedi kwisithuba osifumanayo sokumisela eyona ndawo yokubeka umbhoxo. Ukuba nobungakanani obuchanekileyo kunokunceda ekwenzeni igumbi libonakale likhulu okanye lincinci ngokuxhomekeke kwinjongo.
Igumbi elincinci -Amagumbi amancinci anciphisa ukhetho, ekushiya ufuna ityali encinci. Ukuba unokukhetha enye encinci isezantsi inokushiya ngaphezulu ukutyhileka komgangatho, kusenza igumbi libonakale likhulu ngakumbi. Ukuba igumbi lakho elincinci lineebhedi ezimbini ezicetyiswayo ubukhulu bungu-6 'x 9' ngombhoxo obekwe ngaphambili kwizitulo zebhedi kwaye uqhubeka ngaphaya kweenyawo zebhedi.
Igumbi eliphakathi -Phakathi, okanye igumbi eliqhelekileyo, livula ukhetho oluninzi. Umntu unokubandakanya iiragi ezincinci, iiragi ezinkulu okanye iiteki ezininzi ezilungelelanisa ubeko lwefanitshala. Eyona nto ilunge kakhulu kwigumbi eliphakathi nendawo elinobhedi obukumkanikazi yi-6 'x 9' ngombhoxo obekwe ngaphambili kwizitulo zebhedi kwaye ufikelela kunyawo lombhede.
Igumbi elikhulu -Iiraga ezinkulu zikwacetyiswa kwiindawo ezinkulu. Oku kunokwenza ukuba igumbi lingathambeki kangako, kwaye kuncede ukuthintela ukuziva ubanda ngokuba ityali ithathe indawo enkulu yendawo. Olunye ukhetho olunamagumbi amakhulu kukukhetha iiragi ezininzi zamagumbi asebenza kwimisebenzi emininzi. Oku kungohlula phakathi kwemisebenzi okanye imicimbi enxulumene nendawo nganye yegumbi, okanye ubizele ingqalelo kwindawo ethile.
Owona mgqomo ubalaseleyo kwigumbi elikhulu elinebhedi enobukhulu obuyi-8 'x 10' ubukhulu. Olu luhlu lombhoxo lubonelela ngendawo eyaneleyo ejikeleze ibhedi kunye nokunwebeka ukusuka ekunene phambi kwebhedi kumi ngaphaya konyawo lombhede.
Funda ngakumbi malunga indlela yokukhetha ubungakanani bombhoxo Apha.
Uhlobo oluqhelekileyo -Ukuthatha isigqibo esikhawulezileyo ngokubanzi xa kufikwa kumagumbi okulala kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uzigcine engqondweni. Ubude betyali kufuneka bube ziisentimitha ezili-18 ukuya kwezingama-24 ubude kwicala ngalinye lombhede okumkanikazi. Oku kuya kukhokelela kumbhoxo weenyawo ezisi-8 ukuya kwezi-9 ubude.
Xa kufikwa kububanzi betyali kufuneka ngokubanzi babe malunga neenyawo ezintlanu ububanzi. Ukuba ungathanda ukuba yandise yonke indlela eya kuma-nightstands kufuneka abe malunga neenyawo ezili-9 okanye ngaphezulu ububanzi. Olunye ubungakanani obuqhelekileyo obusetyenziswa ngeebhedi ezinkulu ezimkhulukazi zidweliswe apha ngezantsi.
4 nge 6 ityali -I-intshi ye-4 nge-6 intshi yombhoxo incinci, okuthetha ukuba isetyenziswe kakuhle kwiseti yeerugs. Kukwalungile kwizithuba ezincinci. Lo mbhoxo wobukhulu awulunganga ngokuchanekileyo phantsi kwebhedi yobukhulu bendlovukazi, kodwa endaweni yoko njengezibini ngapha nangapha kwebhedi.
5 nge-7 ityali -I-intshi ye-5 nge-6 intshi yombhoxo yenye encinci, kodwa iyakwazi ukubekwa kamnandi phantsi kwebhedi enkulu. Ngobungakanani obuncinci bale rug buhlala busetyenziswa kwiindawo ezincinci. Akukho zindawo zokulala ebusuku okanye iishelfu ecaleni kwebhedi njengoko zinokubonisa ubungakanani bombhoxo kunye negumbi ngokungalunganga.
I-5 nge-8 yombhoxo - Kakhulu nje kancinane kuneerugs ezikhankanywe apha ngasentla, i-intshi ezi-5 nge-8 intshi yombhoxo inika ubude obuncinci, kwaye inikezela ngezinga elingcono lokubandakanya iindawo zokulala ebusuku okanye iitafile zebhedi. Ngobubanzi obufutshane be-intshi ezi-5, le rug ingaya phantsi kwebhedi kodwa ayinakubekwa phantsi kweendawo zokulala ebusuku. Oku kusekho kwinqanaba elincinci ukuya kubukhulu obuphakathi. Ubungakanani bombhoxo buchaphazela kakhulu ixabiso kwiiragi.
6 nge-9 ityali -Ukungena kumbhoxo ophakathi kweerugs i-intshi ezi-6 nge-9 ye-intshi ilungile kumagumbi aphakathi, kwaye zilungile ngokwenene kwiibhedi ezimkhulukazi. Ezi zikhulu ngokwaneleyo ukuba indawo inokuba neebusuku ezimbini zokulala, kodwa ityali ayinabanzi ngokwaneleyo ukuba ingene phantsi kwayo.
7 nge-10 ityali -I-intshi e-7 nge-10 intshi yombhoxo ikwicala elikhudlwana ukuya kweliphakathi kweerugs, kwaye bobona bukhulu obukhulu bunconyelweyo ukuba bubekwe phantsi kwebhedi enkulu. Oku kunokugqitha okuphezulu kwicala ngalinye ukubonelela ngenduduzo ukusuka ekungeneni nasekuphumeni kwebhedi.
I-8 nge-10 yombhoxo -I-intshi ye-8 nge-intshi ye-10 incinci encinci ebhedini enkulu, kodwa isengabandakanywa kwigumbi lokulala elikhulu. Iinketho ezimbini zokuseta nolu bungakanani kukubeka umbhoxo phantsi kweendawo zombini zokulala kunye nombhede, okanye ukushiya ikota yebhedi ngaphandle kombhoxo ongaphantsi.
9 nge-12 yombhoxo -I-intshi ye-9 nge-12 intshi yombhoxo inkulu kakhulu, kwaye inokuba ntle kwiimeko apho ukutyibilika kungaphantsi kokufanelekileyo kwaye umntu ufuna ukuwugquma. Ezi zifaneleka kuphela kumagumbi amakhulu.
Imbaleki - Iimbaleki zinde ngobude kwaye zimfutshane kububanzi ezenza ukuba zibekwe ngokufuthi macala omabini ebhedi kunye / okanye esiphelweni sebhedi. Ezi zilungele izithuba ezincinci kunye nohlahlo-lwabiwo mali oluncinci. Ezi azibekwa phantsi kwebhedi.
Ujikeleze Imigongqo eround ilungile kumagumbi amancinci, kuba anokugcwalisa indawo echanekileyo efunekayo phantsi kwebhedi, eshiya indawo evulekileyo kwigumbi lonke. Ezi zibekwe kakuhle embindini webhedi, kwaye akufuneki zibengaphezulu kwe-1 leenyawo ubude kunebhedi uqobo.
Isikwere Iiragi zesikwere ziqhelekile kumagumbi okulala, kuba azilingani ngokulingana nobude bebhedi. Bamkelekile kumagumbi amakhulu apho isikwere sinokuthi senziwe sikhulu ukuze sihlale.
Uxande - Iirakhi eziziingxande zezona zixhaphakileyo (kwaye zeziphi ubukhulu ezibhalwe apha ngasentla) kumagumbi okulala kunye namagumbi okulala amakhulu ngokukodwa. Iingxangxasi iirogs zihlala zibekwa ngokungafaniyo ebhedini ukuze kubekho indawo ethe xaxa yokunyathela ityali.
Ngoyilo olunxulumene noko jonga igalari yethu ye Uyilo lwegumbi lokulala Apha.
Ingqokelela ye-Ottomanson Solid Shag Rug, 5'3 '… $ 61.15 umthengisi ogqibelele (7331) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ingqokelela yeSafavieh Madison MAD600C… $ 151.47 umthengisi ogqibelele (10651) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
umqamelo usike iringi yokuzibandakanya kwe-micropave
Ingqokelela yeSafavieh Adirondack ADR103B… $ 32.24 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-252 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Carvapet Luxury Soft Faux yeegusha Fu ... $ 36.89$ 48.99 umthengisi ogqibelele (5254) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ingqokelela yoMbono weSafavieh VSN606B M… $ 45.10$ 165.00 umthengisi ogqibelele (5508) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Uyenza njani iribhoni enentambo ye-youtube
Umama womtshakazi unxibe iisuti zasebusuku
izimvo zokuhombisa ngetheyibhile
Iingoma zekhekhe lomtshato zale mihla
Iminyaka emi-6 yezimvo zesipho